Online Marg | सभामुख भइसकेका महराले मन्त्री बन्न मरिहत्ते गरेपछि माओवादीमा रडाको, प्रवक्ता श्रेष्ठ पनि मैदानमा !
सभामुख भइसकेका महराले मन्त्री बन्न मरिहत्ते गरेपछि माओवादीमा रडाको, प्रवक्ता श्रेष्ठ पनि मैदानमा !
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारीकाबीच नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बन्नेले तछाडमछाड गरेका छन् । पूर्व सभामुख कृष्णवहादुर महराले मन्त्री बन्नका लागि लविगं गरिरहेका छन् ।
मन्त्री छान्नका लागि माओवादी स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ । माओवादीले बढीमा ७ मन्त्रालय पाउने र त्यसमा स्थायी कमिटीकै नेताहरुको प्रतिस्पर्धा भएपछि प्रचण्ड सकसमा परेका छन् ।
यस्तै, माओवादी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र महराले उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारम जान खोजेपछि माओवादीमा रडाको मच्चिएको छ । श्रेष्ठ र महरालाई रोक्न प्रचण्डमाथि दबाब छ । महरा सभामुखसहित ५ पटक मन्त्री र तीन पटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । उनी अब प्रधानमन्त्री हुनमात्र बाँकी छ ।
Tags :माओवादी केन्द्र